Shiinaha Warshad Mashiinka Mashiinka Buuxinta Kululeeyaha Dhalo PET | Higee
Khadkeena mashiinka buuxinta dhalada ee PET wuxuu isku daraa mayrida dhalada, buuxinta iyo mashiinka mashiinka hal mashiin monoblock ah. Nidaamyada waxaa si toos ah loogu fuliyaa si toos ah. Buuxinta dhalada PET ama dhalada dhalada ah ama dhalada dhalada ah dhamaantood waa la habeyn karaa.
Ku Tartama Mashiinka Dhalada Casiirka PET Mashiinka Kulul 4 4 Line-ka Wax Soo Saarka ee Monoblock
Waxaan sidoo kale ku qalabayn karnaa qadka wax soo saarka cabitaanka qalabka daaweynta biyaha, nidaamka qalabka isku dhafka daaweynta, iyo nidaamka wax lagu duubo oo ay ku jiraan mashiinka calaamadeynta gacmaha oo hoos u dhaca, mashiinka wax lagu duubo oo hoos u dhaca iwm.
1. Qalabka hawada
Nidaamka Buuxinta iyo Qalabka Xirmooyinka
Mashiinka taxanaha ah ee 'RXGF juice juice' mashiinka buuxinta kulul wuxuu isku darayaa dhaqida dhalada, buuxinta biyaha iyo iskuxirida hal monoblock, seddexda geeddi-socodna si toos ah ayaa loo fuliyaa. Waxaa loo isticmaalaa buuxinta kulul ee casiirka iyo cabitaanka shaaha. Waxay ku qalabeysan tahay nidaamka xakamaynta heerkulka saxda ah, nidaamka socodka socodka, nidaamka nadiifinta otomaatiga ah iyo barnaamijka xakamaynta. Cunsur kasta oo mashiin ah oo dareeraha la xiriira wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo aan fiicnayn iyo caag u dhigma cuntada.
Heads Dhammaan madaxyada rinjiga lagu nadiifiyo ee birta ah, naqshadda duritaanka biyaha lagu buufiyo, inbadan oo biyo badbaadin ah & nadiif badan.
Ri Dahaarka birta ah ee aan xarka lahayn oo leh suuf caag ah, hubi in shilalka ugu yar ku dhaco intaad dhaqeysid
Bambooyin lagu dhaqo birta aan lahayn
No Mashiinka buuxinta saxda ah ee saxda ah, xakamaynta calaamadaha isbeddelka PLC, hubi saxsanaanta buuxinta
Buuxinta culeyska, & buuxinta si habsami leh & joogto ah
Dhammaan qaybaha xiriirka aan lahayn ee biraha & haanta dareeraha ah, sifiican u nadiifiya, nadiif ah
Bottle Dhalo malahan wax buuxin ah
System Nidaamka meelaynta iyo xiritaanka, madaxyada xarkaha elektromagnetic, oo leh hawsha dheecaanka culeyska, hubi in dhalada ugu yar ay dhacdo inta lagu jiro xiritaanka
Dhammaan 304 dhismaha bir-birta ah
Bottle Ma jiro dhalo aan la jarin iyo joogsiga otomaatigga ah markii dhalo la'aantu jirto
Awood / 500ml
3.Soomaha Isteerteriga ah
Hore: Mashiinka buuxinta cabitaanka tamarta
Xiga: Mashiinka Buuxinta Dhalada Beerka ah